Fil d'actualités du 25/03/2019
25/03/2019 - 12:00 : ONIVERSITEN'ANTANANARIVO: Nanamafy ny hetsika ataony, ary nampikatso tanteraka ny asa fampianarana ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka na ny SECES Sampana Antananarivo androany.
25/03/2019 - 11:30 : VEHIVAVY MANANA OLANA ANY KOWEIT: Nanainga omaly nihazo an'i Koweit ireo delegasionina nalefan'ny fanjakana hijery sy hamaha ny olan'ireo vehivavy Malagasy miasa any an-toerana izay manana olana samihafa, toy ny fampijaliana, fanagiazana pasipaoro,...
25/03/2019 - 11:00 : BEHENJY: Fiara maromaro no nifandona androany maraina, ka nisy ny nivadika mihitsy ary tao ny nisy fahasimbana.
25/03/2019 - 10:30 : RAHARAHA KIDANAPPING : Nosamborina ny faran’ny herinandro teo i Manantena Haja, kandida solombavambahoaka lisitra faharoa ao Ifanadiana, izay efa voarohirohy tamin’ny fakana an-keriny ilay karana antsoina hoe Arman Kamisy tany Toamasina ny faramparan’ny taona 2018.
25/03/2019 - 10:00 : TERATANY KARANA NISY NAMONO: Vehivavy teratany karana iray mipetra-drery no nisy namono tao an-tranony omaly alahady tetsy Behoririka. Norobaina ny tranony, taorian'ny famonoana azy.
21/03/2019 - 11:00 : MINISITRA ROA KANDIDA HO DEPIOTE: Ho an'ny Minisiteran'ny fanabeazam-pirenena dia ny Minisitra Félicitée REJO-FIENENA misahana ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika no handray izany vonjimaika. Ho an'ny Minisiteran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy kosa dia ny Minisitry ny ati-tany Tianarivelo Razafimahefa no hitantana vonjimaika ity Minisitera ity.
21/03/2019 - 11:00 : SOAVIMASOANDRO: Misy ny hetsika fizaham-pahasalamana maimaimpoana arahina fanafody tanterahin'ny TIMK25 tarihin'ny kandida depiote Ralambozafimbololona Fetra nanomboka ny maraina teo. Tonga maro ireo mponina. Tsy hijanona eto aminy fokotany Soavimasoandro, fa hitohy any amin'ny fokontany maro eto aminy boriborintany faha-5 indrindra any aminy toerana marefo, hoy ny kandida Fetra.
21/03/2019 - 10:30 : ZAVA-KANTO: Nodimandry alina i Pierre ao amin'ny Tarika Nanahary. Lala no tena nahafantaran'ny olona azy.
21/03/2019 - 10:00 : POEZIA: Marihina anio 21 marsa ny andro maneran-tany ho an’ny poezia. Hanamarika izany amin’ny alalan’ny fiantsana tononkalo mitety vohitra ireo poeta avy etsy anivon’ny Ivon-toeran’ny Kolontsaina Malagasy na ny IKM. Hifanome fotoana eo amin’ny Tranombokim-pirenena ireo mpiantsa ary hizotra mihazo ny toerana rehetra manodidina ny renivohitra hizara ny sanganasany. Ny « fiarovana ny tontolo iainana » no lohahevitra amin’izany.
21/03/2019 - 09:00 : CNAPS: Nesorin'ny fanjakana nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny Tale Jeneralin'ny orinasam-panjakana misahana ny fiahiana ara-tsosialy dia ny CNAPS.
Archive du 20171104
Mpianatra matin’ny pesta teny Isotry Mampifanolana ny fanjakana sy ny Katolika
Tsy mampitovy hevitra ny minisiteran’ny fanabeazana sy mpitantana ny sekoly katolika iray ny filazana fa matin’ny pesta ny mpianatra iray. Mpianatra, kilasy faha-8 tao amin'ny sekoly katolika "Jean 23" Isotry no voamarina fa namoy ny ainy noho ny aretina pesta aretin-tratra ny alatsinainy 30 oktobra.
Fitondrana HVM Tsy mahafehy serasera
Nanomboka nihetsiketsika tamin’ny serasera anaty facebook sy eny amin’ny haino aman-jery ary gazety an-tsoratra ny tapaky ny volana oktobra teo ny olon’ny ankolafy Rajoelina.
« Motion de censure » Nanjavona tampoka teny Tsimbazaza indray
Novoizin’ireo solombavambahoaka mpomba ny fitondrana tarihan’ny depiote Randrianasolo Jean Nicolas nanerana ny haino aman-jery maro teto Iarivo ny fisian’ireo sonia maro voaangon’izy ireo hanatanterahana ny fametrahana ny “Motion de censure”
Ravalomanana sy ny TIM Tsara toerana indrindra hanarina ny firenena
Miha mitotongana andro aman’alina ny fanaovana politika eto amintsika.
Firenena indonezianina Hanamafy fifandraisana ara-barotra amin’i Madagasikara
Tonga nanao fitsidihana am-pifanajana ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, teny Iavoloha omaly ny iraka manokan’ny fitondram-panjakana indonezianina,
Depiote Horace sy ny TIM Boriborintany faha-6 Mikarakara Fifaninana Fonenanana Madio
Ho fanohanana ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo-Renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana amin’ny ady amin’ny Pesta ary fanamafisana ny tanjona
Mihinana fakom-bazaha !
Manao ahoana ry Jean a ! Mahatsiaro ny fampanantenana nataonareo indray mikasika ity efa vidangan’ny vidin-kanina andro aman’alina ity dia mba manoratra e ! Aiza ve ry Jean,
Banky Foiben’i Madagasikara Natao roaka alika ny mpanao gazety
Nanao valandresaka sy fampitam-baovao ho an’ny mpanao gazety teny amin’ny Hotely Le Louvre Antaninarenina ny avy amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) tarihin’ny governora Alain Rasolofondraibe omaly maraina.
Volavolan-dalàna momba ny satan-tany Velon’ahiahy ny fiarahamonim-pirenena
Handalo ary hodinihina eny anivon’ny Antenimieram-pirenena amin’ny talata 7 novambra ho avy izao ny volavolan-dalàna momba ny satan-tany vita titra.
Traboina any Bekoboka Besalampy Miandry ny Bngrc sy ny fanjakana foibe
Ao anatin’ny hanoanana tanteraka ireo mponina traboina any Bekoboka Besalampy noho ny fahamaizan’n y tanànany hatrany amin’ny 90 % ny zoma 20 oktobra lasa teo.
Vehivavy mpisoloky avy nigadra Nidoboka indray fa nanodina 3 tapitrisa ariary
Nidoboka am-ponja indray i Herinala Veronique, 35 taona. Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny sampandraharaha miady amin’ny kolikoly na ny SCLC etsy Anosy izy ny alakamisy 2 novambra maraina teo,
Ady totohondry sy Komity Olimpika Malagasy Halako bika sy tsy tiako tarehy no misy, hoy i Gégé Bosco
Nanakoako tamin’ny herinandro lasa teo ny fanambarana navoakan’ny COM na ny Komity Olimpika Malagasy nanao fivoriambe tany Toliara mikasika ny tsy maintsy hanesorana an’Atoa Andriamanampisoa Gégé
Afrobasket 3 x 3 TOGO Nigeria sy Niger no hifandona amin’ny Madagasikara anio
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly zoma 03 novambra 2017 tany Lomé TOGO ny fifananinanana fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika eo taranja Basikety baolina FIBA 3 x 3 andiany voalohany izay haharitra hatramin’ny alahady 05 novambra ho avy izao.
Edito Demokrasia inona ?
Firenena fatra-pandala sy mpanaja ny demokrasia, hono, i Madagasikara. Saika noventesin’ny fitondrana matetika izay tao ho ao.
Fisorohana ny valanaretina pesta Mifanolo-tanana amin’ny CUA ny Startimes
Nanolotra ranom-panafody 30 litatra hahafahana manondraka velarantany 20.000m2
Hiverina hianatra ny mpianatra Feno ny fepetra, hoy ny minisitera
Feno tanteraka ny fepetra hahafahantsika mampiditra indray ireo zanatsika hianatra amin’ny alatsinainy 6 novambra, indrindra ireo sekoly niato noho ny antony efa fantatsika,
Fiverenana an-tsekoly Mila hentitra ny “Comité de vigilance”
Namoaka fanambarana omaly ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena fa efa feno ny fepetra rehetra hahafahan’ny mpianatra miverina an-tsekoly,
Sekoly ambony UPRIM Amin’ny 8 novambra ny fidirana
Ny alarobia 8 novambra ho avy izao no hiditra amim-pomba ofisialy ny sekoly ambony UPRIM amin’ity taom-pianarana 2017-2018 ity.
Mpangalatra “sprinter” sy “mazda” Saron’ny mpitandro filaminana ireo jiolahy
Tamin’ny 13 aogositra no namitahan’ireo olon-dratsy tamin’ny alalan’ny fakana ny fiara hanao “special” ny mpamily teny amin’ny By Pass, raha ny fanazavan’ny Kolonely Pascal Randriamanantena,
Kaominina ambano –Antsirabe II Anjakan’ny dahalo tanteraka
Miverina mirongatra indray ny asan-dahalo sy ny tsy fandriampahalemana ao amin’ny distrikan’Antsirabe faharoa ary anisan’ny lasibatra matetika ny kaominina ambanivohitra Ambano.